Filimka Total Dhamaal oo ganacsi wacan sameeyay maalintiisa kowaad sida shabakada BOI soo daabacday – Filimside.net
Filimka Total Dhamaal oo ganacsi wacan sameeyay maalintiisa kowaad sida shabakada BOI soo daabacday
Filimka shactirada badan Total Dhamaal ayaa ganacsi wacan sameeyay maalintiisa kowaad haatana wuxuu qabsaday dhabo wacan oo uu guul ku gaari karo haddii Sabti iyo Axad sare u kac weyn sameeyo.
Filimka Total Dhamaal ayaa maanta subaxdii hore ku furmay 25% kadibna xiliga duhurka iyo galabta ayuu gaaray 35% balse caawo fiidkan ayuu halkii ugu sareesay gaaray oo ah 65% sidaa darteed qiyaasta xili hore la bixinaayay oo ahayd 14 Crore ilaa 15 Crore inuu keenayo filimkan wuu dhaafay.
Haatan shabakada Boxoffice India (BOI) waxay soo daabacday in filimka Total Dhamaal maalintiisa kowaad keenay 16 Crore (Qiyaasta xili hore) madaama uu caawo si heer sare ah u gadmaayo wuxuuna noqday Ajay Devgn filimkiisa ugu bilaabashada wanaagsan oo aan maalin fasax ah la daawanin waayo Ajay aflaantiisa ugu bilaabashada waanagsan Singham Returns iyo Golmaal Again in maalin fasax qaran la daawaday kana tilaabeen min 30 Crore.
Waxaa a dhihi karaa Total Dhamaal waa filimkan sanadkan ugu bilaabashada wanaagsan sida hadalka u dhigeyso shabakada BOI madaama Gully Boy maalintiisa kowaad 19.25 Crore keenay waxaa ganacsigan 30% ilaa 35% caawiyay maalinta jaceylka aduunka ah haddii fasaxaas meesha laga saaro lacagta saxda ah Gully Boy maalintiisa kowaad wuxuu keenay 14 Crore ilaa 15 Crore marka Total Dhamaal oo fasax la’aan ah isagana 16 Crore ayuu ku bilaawday waa sababta loo leeyahay cabirka ah Total Dhamaal ayaa ka bilaabasho wanaagsan Gully Boy.
Filimka Total Dhamaal wuxuu ganacsi adag maalinta kowaad ka sameenayaa Rajasthan iyo CP Berar weliba min 1 Crore ayuu suuqyadan ka keenayaa wuxuuna halkaan kaga bilaabasho wanaagsan yahay labada filim ay isku fariinta yihiin Welcome Back iyo Judwaa 2 ganacsiga ay maalinta kowaad ka sameeyeen.
Waxaa la rajeynaa Sabti iyo Axad in magaalooyinka waa weyn ganacsi adag ka sameeyo madaama qoysaska usoo daawasho tagi doonaan waayo waa filim fariintiisa nadiif tahay oo qoysaska daawasho ahaan ku raaxeesan doonaan.
Waxaa Aqrisay 676
Nasib wacan Ajay iyo xertiisa